Soo dejisan Far Manager 3.0.4774 iyo 3.0.4830 beta – Vessoft
Soo dejisan Far Manager
Maareeyaha Far – barnaamij universal in nidaamka faylka shaqeeyaan. software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u fuliyaan hawlaha asaasiga ah la files, fayl iyo archives, sida koobiyeynta, dhaqaaqin, tirka, tafatir, iwm Manager Far waa in la server FTP shaqeeyaan awood iyo maamulo madbacadaha gudaha ama network. software The taageertaa qaabab windowed iyo fullscreen. Maareeyaha Fog u saamaxaaya in ay xaalkaa diiwaanka nidaamka, maareeyaan mudnaanta geeddi socodka oo wuxuu oofin koodh ama kelmadaha of files. Maareeyaha Far kuu ogolaanayaa inaad isku xiro modules badan oo dheeraad ah si loo ballaariyo shaqeynta ee software ah.
La shaqee server FTP ah
Sireed oo kelmadaha of format file UUE
Maareynta mudnaanta geedi
La shaqee noocyada kala duwan ee madbacadaha
Connection of plagins badan
Far Manager Software la xiriira:
English, Français, Español, Deutsch... Folder Lock 7.6.3
العربية, English, Français, Español... EaseUS Todo PCTrans 9 Free iyo Pro
Photo Agabka in la abuuro collages sawirka. software ka kooban yahay go'an aasaasiga ah ee qalabka tafatirka, wax badan oo habyaalada la heli karo iyo saamaynta dheeraad ah.